China LEDD620620 Ceiling LED Dual Dome Medical Inoshanda Chiedza neWall Control vagadziri uye vanotengesa | Wanyu
LEDD620620 Ceiling LED Dual Dome Medical Inoshanda Chiedza neWall Kudzora
LEDD620 / 620 inoreva kune mbiri dzimba dzimba dzakakwidzwa kurapwa kwechiedza.
Chigadzirwa chitsva, icho chagadziriswa pamusoro pechigadzirwa chepakutanga. Aluminium alloy shell, yakagadziridzwa chimiro chemukati, zvirinani kupisa kupisa maitiro. 7 mwenje ma module, akazara e72 mababu, maviri mavara eyero uye machena, emhando yepamusoro OSRAM mababu, tembiricha tembiricha 3500-5000K inogadziriswa, CRI yakakwira kupfuura 90, mwenje unogona kusvika 150,000 Lux. Iyo yekushandisa pani ndeye LCD yekubata skrini, kuvhenekera, tembiricha tembiricha, CRI inoreva kuchinjika shanduko. Iwo maoko ekumisa anogona kufambiswa zvakapfava uye kumiswa nenzira kwayo
1. Chiedza-Kurema Kumiswa Ruoko
Yakasimudzwa ruoko ine huremu-huremu dhizaini uye inoshanduka dhizaini iri nyore kungira uye kumisikidza.
2. Shadow yemahara kuita
Iyo arc yekurapa inoshanda mwenje inobata, yakawanda-poindi mwenje sosi dhizaini, 360-degree yunifomu kuvhenekera pachinhu chekucherechedza, hapana mweya. Kunyangwe kana chikamu chayo chakavharwa, iyo yekuwedzera yemamwe akawanda yunifomu matanda haazokanganisa mashandiro.
3. Yakakwirira Ratidza Osram Mabumba
Iyo yakakwira yekuratidzira girobhu inowedzera kuenzanisa kwakapinza pakati peropa nemamwe matishu uye nhengo dzemuviri wemunhu, zvichiita kuti chiratidzo chechiremba chijeke.
4. Synchronous Kuchinja
Iyo tembiricha tembiricha, mwenje kusimba uye neruvara kupa indekisi yeyekurapa inoshanda mwenje inogona kuchinjwa zvakaenderana kuburikidza neLCD control panel.
Chiedza chakakosha cheendosikopu chinogona kushandiswa kune mashoma ekuvhiya maitiro.
5. Kusimbisa Dunhu Dunhu
Dunhu rakafanana, rimwe nerimwe boka rakazvimiririra kune rimwe, kana rimwe boka rakakuvara, mamwe anogona kuramba achishanda, saka zvinokanganisa mashandiro acho zvidiki.
Kuwedzeredza-voltage kudzivirira, kana iwo magetsi uye azvino apfuura iwo muganho kukosha, iyo sisitimu inozozvimisa yega simba rekuona kuchengetedzeka kweiyo system wedunhu uye yakakwira-kupenya mwenje mwenje.
6. Zvakawanda Zvishongedzo Sarudzo
Nezve ichi chekurapa mwenje unoshanda, inowanikwa nemadziro ekudzora, kure kure uye bhatiri back up system.
LEDD620620 Chiedza Chekushandisa Chiedza
Pashure: LEDD730740 Ceiling LED Dual Head Chiremba Chiremba Kuvhenekesa Mwenje ine yakakwira mheni Simba
Zvadaro: LEDD500 / 700 Ceiling LED Kaviri Musoro Muchipatara Chiedza Chiedza neEC Certification
LEDB620 Wall Type LED Kuvhiya Mwenje kubva kuMa ...
LEDL100S akatungamirira Gooseneck Mobile Medical Examinati ...
LED L730 akatungamirira AC / DC mumvuri Kuvhiya Chiedza Fro ...
LEDL260 CE Yakatenderwa Mira Type LED Kuvhiya Exa ...
LED D620 Ceiling LED Imwe Musoro Chiremba Chiedza w ...
LEDD500 / 700C + M Kudenga kwakatungamira Double Dome Operatin ...